Vimba iAkhawunti ye-Instagram, Fumanisa ngoku! Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
NgoJanuwari 6, 2019 0 IiCententarios 735
Umntu ngumntu ngumntu onxibelelanayo ngokwemvelo, kunye nexesha lokufunda indlela yokuzibonakalisa ngeendlela ezahlukeneyo naphantsi kwendlela ezahlukeneyo. Ke iinethiwekhi zentlalo usethe umgangatho intengiselwano kuphuhliso lwempucuko. Ukuvumela omnye wemisebenzi ebalulekileyo yoluntu ukuba izalisekiswe, njengonxibelelwano. Ngesi sizathu, ukukwazi ukugcina ukunxibelelana kwangoko, nokuba ziimayile kude, kunye nezihlobo kunye nezihlobo kuya kuba linyathelo eliza kuthatha ubudlelwane phakathi kwabantu kwinqanaba eliphezulu. Kodwa obu budlelwane bunokuba sisiphango, ukuya kwinqanaba lokufuna ukubhloka kwiakhawunti ye-Instagram.
Omnye intanethi eyaziwa ngokubanzi kwaye yamkelwe yi Instagram. Apho unokufaka khona iifoto kunye nevidiyo, yongeza inkcazo kunye nendawo. Ngokuthumela nakubani na ofuna. Ngale ndlela, ukuba nolwazi ngeziganeko, iindaba kunye nemeko yokuthanda abahlobo kunye nabantu abasondeleyo kuphela ngu- landela.
IiNgile kunxibelelwano lwasentlalweni
Kwimeko yobudlelwane bothando, nokuba uphi na iqabane lakho, unokuseka unxibelelwano naye okanye Thumela iifoto, iividiyo kunye nokunikezelwa. Ukugcina unxibelelwano rhoqo ngale ndlela. Ngokusebenzisa i-Instagram, wenza unxibelelwano nomntu onomdla kuye naphi na. Kodwa hayi indlela ekukuhle ngayo ukuba ubudlelwane buyehla buye baphela, kwaye hayi ngokwemibandela elungileyo. Ukufikelela kwinqanaba lokuba ufune ukuvimba Iakhawunti ye-Instagram yalomntu.
Nangona kunjalo, iiwebhsayithi zokuncokola zinokuba yindlela yokuxhatshazwa, ubundlongondlongo kunye nokungcungcuthekisa. Mhlawumbi ebusweni bohlukwano olungenabuhlobo, inethiwekhi yezoluntu ngamanye amaxesha iyaba likhoboka langaphambili. Kulapho a ixesha lokuhlola omnye umntu, "wenze ntoni", "uphume waya phi", "ubone nabani", "iphele nini ukugqitywa". Ngamanye amaxesha oku kubandakanya uthotho lwemiyalezo ethe ngqo ekhubekisayo kunye nezimvo zohlobo olufanayo. Njengokuba kunjalo, xa abantu ongabaziyo besaphula imfihlo yakho kwaye beqala ukugqabaza ngendlela engathandekiyo kwiifoto zakho. Ukongeza ekuthumeleni imiyalezo rhoqo kwi-inbhoks yakho, ezinye zine Intiyo, engathandekiyo okanye engamanyala. Ke, ihlala ifuneka ukuthintela i-akhawunti ye-Instagram yomntu othile.
Unokuba nomdla indlela yokubuyela kwi-Instagram.
I-Instagram ikunika esinye sezisombululo ezilungileyo onokuthi uziphephe kwaye ubekhona kula maxesha angathandekiyo, okushiya okuninzi ukucinga ngomnye umntu. Njengokhetho lokuthintela i-akhawunti ye-Instagram. Ngale ndlela, sele elungile ngeke ukwazi ukubona nayiphi na iposti yakho Okanye uqhagamshelane nawe ngale ndlela, enyanisweni, xa ujongisisa iprofayile yakho, kuya kubonakala ngathi awukhange ulayishe naluphi na upapasho, oko kukuthi, yonke into ingenanto. Kodwa, le ndlela iza kukuthintela ekuboneni okanye ungayibhalele lo mntu, awuyi kuba nakho ukufikelela kulwazi lwakho oluthumele phantsi kwayo nayiphi na into enokwenzeka ngelixa ivaliwe. Ukuba ufuna olu khetho, luyimfuneko bathobele uthotho lwamanyathelo Ukufezekisa umsebenzi.
Yazi iakhawunti njengebhloko
Into yokuqala iya kuhlala ichaza ukuba ngubani oza kuba ngelishwa ukuvimba iakhawunti ye-Instagram, lowo ubesebenzisa iindlela uku yonakalisa usuku olunokugqibelela. Nje ukuba injongo iphawulwe, siya kwi-bar ukuya kuhlola kwisicelo kwaye siyayikhangela, xa uyifumene kuya kufuneka ufake iprofayile yayo, ewe! Ziphi iifoto zakho kunye nolwazi lomntu, hayi, ayiyongqinisiso. Iya kuba kukucofa kwikona ephezulu ngasekunene apho amanqaku amathathu aqwalaselweyo (elinye ngaphezulu kwelinye).
Khetha kwaye uqinisekise
Nje ukuba ukhethe amanqaku amathathu, uthotho lwezinto oza kukhetha kuzo ziya kubonakala phambi kwakho. Yakho apho iya kubakho khona eya kwenza amehlo akho akhanye, utsho ngokucacileyo "BHALA". Ngaphandle kokuthandabuza okanye ukuzula, cofa kukhetho olufunayo ukuvimba iakhawunti ye-Instagram, ngaphambi kombuzo wokuqinisekisa kwangoko emva kokuvuma, "Ewe, NDIKUQINILE". Kwaye i-voila, sele ivaliwe, ke le akhawunti ayisayi kuphinda ibone naziphi na izithuba zakho, kwaye ayizukukuthumela nayiphi na imiyalezo, nokuba uyifaka iprofayile yayo iya kubonakala ngokungathi ayithunyanga nayiphi na iposi.
Unokuba nomdla indlela yokwenza i-repost kumabali e-Instagram.
Isenzo sokubuyisela umva
Kuyimfuneko ukukhankanya, ukuba le ndlela yokuthintela i-akhawunti ye-Instagram ayisosigxina okanye ayinakulungiswa, ukuba nangaliphi na ixesha uyeke-umlilo okanye ngenxa yezizathu zobomi, uthatha isigqibo sokuyivula, inokwenziwa. Kuya kufuneka uphinde ufake iprofayile yakho, nakwibar yewindows, apho "LANDELA ” igama liya kuvela "VULA", ngokunqakraza apho unxibelelwano luya kubuyiselwa kwaye ke ukwazi ukubona, ukuphawula nokuthanda iposi yakho.
Ukukhumbula ukuba iiwebhsayithi zokunxibelelana ziluncedo kunye nezixhobo ezinemveliso ebantwini. Zikwenza lula nonxibelelwano, kodwa zingasetyenziselwa ukuhlasela, ukuphatha gadalala okanye ukuhlukumeza umntu. Ke ngoko iyimfuneko bazisebenzise ngokwazisa nangothintelo. Ukuthintela iimeko ezinzima. Kunye nakwiimeko apho unokuziva ulixhoba lokuhlukumeza okanye ubundlongondlongo, ukuvimba iakhawunti ye-Instagram yenye yezixhobo ezifanelekileyo ezinikezela ukuba ukhusele ubumfihlo bakho, kwaye ke ingqibelelo yakho.
Unokuba nomdla indlela yokuchaza kumanqaku e-Instagram.
1 IiNgile kunxibelelwano lwasentlalweni
2 Thatha inyathelo!
2.1 Yazi iakhawunti njengebhloko
2.2 Khetha kwaye uqinisekise
3 Isenzo sokubuyisela umva
NgoJanuwari 3, 2019
Izinto ze-5 ongafanele uzenze kwi-Instagram
NgoJanuwari 7, 2019